CAD Engineering Drawing - MYSTERY ZILLION
July 2007 edited June 2009 in AutoCAD
ကဲအားလုံးသောဖိုရမ်ကိုစတင်အကြံပြုထားသော lovesence နဲ့တကွ
CAD ၀ါသနာရှင်များရောပညာရှင်များအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်...လုပ်ပေးတဲ့သူကလုပ်ပေးပြီးပြီဆိုတော့ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဗျာ..:67: လောလောဆယ်ဆွေးနွေးစရာမရှိလဲကိုယ်ဆွဲထားတဲ့ပုံထဲကကောင်းတာလေးတွေတင်ကြဗျာ...ဆွဲနည်းမသိတာရှိရင်မေးမယ်...:6:
သုံးထားတဲ့ 3Dcommand တွေကတော့
extrude,Torus,Slice,3Drotate,Subtract တို့ပါပဲ...Nut ခေါင်းကိုတော့ surface နဲ့ဆွဲထားတာပါ..
ဒါကတော့ path extrude တခုနဲ့ပဲဆွဲထားတာပါ..
Image တွေကို ကျွန်တော့် အနေနဲ့ image တိုက်ရိုက် upload လုပ်လို့ရတဲ့ ဟာနဲ့ တင်စေချင်ပါတယ်..
ကို နှိပ်ပြီး.. ပုံတွေကို upload လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်.. ပိုပြီး မှန်မှန်တက်လာအောင်ပေါ့.. \_:D/
လှတယ်ဗျ... အဲလိုမျိုး ဆွဲလို့ရမယ်လို့ ထင်တောင်မထင်မိဘူး.. :d
ဒါကတော့စိတ်ကူးယဉ်ဆွဲထားတဲ့ကြောင်လိမ်လှေကားပုံလေးပါ...လှေကားရင်းမှာတယောက်သောကောင်မလေးပုံကို reference image နဲ့တင်ထားတာပါ..ဒီမှာတော့ပြန်ဖြုတ်ထားတယ်ဗျာ...:P
သုံးထားတဲ့ command တွေကတော့ extrude,array, copy,cylinder တို့ပါပဲ..လှေကားလက်ရမ်းကိုတော့surface နဲ့ဆွဲထားတာပါ..
အခု ကြောင်လိမ်လှေကားတွေမှာ တိုင်ပျောက်ပုံတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီဆို... :39:
အခု ဒီမှာ တိုင်ပါနေပါလား.. ဟိဟိ
နည်းပညာလေးတွေလည်း ေ၀မျှပါဦးခင်ဗျာ ....
ကျွန်တော်ကတော့ AutoCAD ထက်စာရင် 3dmax တို့ကို ပိုပြီးရင်းနှီးပါတယ်။ ကျွန်တော်တွေ့ဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံအရ နိုင်ငံခြားသွားခါနီးကျရင် အင်ဂျင်နီယာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ ... AutoCAD သင်တန်းတက်ကြပါတယ်။ တက်သင့်လို့လားဗျာ ... အကယ်၍တက်သင့်တယ်ဆိုရင်လည်း သိသင့်တဲ့အပိုင်းလေးတွေသင်ပေးပါလား ...
အခုမှလေ့လာနေတုန်းပါ .. အဲ Box , Cylider တို့လောက်ပဲ ဆွဲတတ်တယ်ဗျာ ..
ko pZi ရေ...ခုလိုလာရောက်ဆွေးနွေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ...ကျွန်တော်က 3dmax အကြောင်းကိုကြားဖူးရုံပဲရှိပါတယ်...တကယ်တော့ AutoCAD ရယ်လို့နံမည်ကျော်နေတာ
ဟာ 2d နယ်ပယ်မှာသူ့ကိုယှဉ်နိုင်တဲ့ဆော့၀ဲလ်မရှိလို့ပါ...တကယ်တန်း3d ပုံယှဉ်ဆွဲကြမယ်ဆိုဘယ် 3d software ကိုမှမယှဉ်နိုင်ပါဘူး...ဒါပေမယ့်တခုကောင်းတာက AutoCAD မှာ plot လုပ်ဖို့အတွက် layout ပိုင်းကို special ပြုလုပ်ပေးထားတာပါပဲ...အဲဒါကြောင့်လဲ ခုချိန်ထိ engineering drawing မှာအော်တိုကတ်ဟာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အဆင့်ကနေမလျှော့သေးတာပါ...ခုနောက်ပိုင်းအော်တိုကတ်နဲ့ တွဲပြီးသုံးလို့ရတဲ့ CADWorx Plant ဆိုတဲ့ piping software မျိုးတွေတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာ...3D pipe line တွေဆွဲတာမှာတော်တော်မြန်မြန်ဆွဲလို့ရတာတွေ့ရတယ်...ကျွန်တော်လဲခုမှစမ်းနေတုန်းပဲ...3DMax အကြောင်းကိုလဲသိထားချင်ပါသေးတယ်...အကိုအားရင်လဲရှယ်ပါအုံးဗျာ..ခုကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ပုံတွေ က 3DMax နဲ့ဆိုလွယ်လွယ်လေးဆွဲလို့ရမှာပါ...
နို်င်ငံခြားသွားကာနီးလူတွေ တတ်သင့်လားဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာ..ကျွန်တော့်အမြင်ဆိုရင်တော့ ကွန်ပျူတာနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားလူဆိုရင်တော့AutoCAD မှမဟုတ်ပါဘူး application software တခုခုကိုကျွမ်းကျင်ထားသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်...သွားခါနီးမှကပ်ပြီးတတ်တာမျိုးကတော့သိပ်အကျိုးရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး...တချို့လည်းအကိုပြောသလိုengineer မဟုတ်ပေမယ့်AutoCAD နဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးလစာကောင်းနေတဲ့သူတွေတွေ့ပါတယ်...သူတို့ကမြန်မာပြည်မှာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၄။၅နှစ်လောက်ရှိပြီးမှအပြင်ထွက်...အင်တာဗျူးလိုက်၀င်...လက်တွေ့ဆွဲခိုင်းတဲ့ကုမ္ပဏီမျိုးနဲ့တွေ့ရင်ရသွား တာပေါ့ဗျာ...အဓိကကတော့အပြင်ထွက်မယ်ဆို language ကအဓိကပဲဗျို့...ကိုယ်သွားမယ့်နိုင်ငံရဲ့ဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်ထားပြီဆိုဘယ်နေရာမဆိုမျက်နှာပန်းလှ တယ်ဗျာ..ပြောသာပြောတာပါ..ကျွန်တော်လဲခုထိ AutoCAD နဲ့ပတ်သတ်တဲ့အလုပ်မရသေးပါဘူးဗျာ..:D ရှာနေဆဲပါပဲ...လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်က AutoCAD နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး...ခုနကပြောသလိုကျွန်တော်က E လိုသိပ်မကျွမ်းတော့လူတော့မတိုးဘူးပေါ့ဗျာ...ပြောတာလဲရှည်သွားပြီ...နောက်မှထပ်ဆွေးနွေးတာပေါ့ဗျာ...:67:
ကိုလမင်းရေ...AutoCAD ကိုစိတ်၀င်စားတယ်ဆိုတာသိရလို့၀မ်းသာပါတယ်ဗျာ...ပြောသာပြောတယ်..ရှိုထားတာလားမသိပါဘူး.. ဘာမှမသ်ဘူးမသိဘူးနဲ့တော်တော်သိနေပုံရတယ်:P
ကျွန်တော်လဲလေ့လာနေဆဲပါပဲဗျာ...တကယ်တမ်းကျတော့AutoCAD မှာ 2D ကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းဆွဲနိုင် ပြီဆိုရင်လုပ်စားလို့ရပါပြီ...အရင်ဆုံးအသုံးများတဲ့ command တွေနဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုသိအောင်လုပ်ရမှာပေါ့ဗျာ...နောက် dimension ပေးတာ.. layer တွေခွဲတာ...စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်..တဆင့်ချင်းသွားကြည့်ပေါ့ဗျာ...ကျွန်တော့်မှာ AutoDesk ကထုတ်တဲ့ AutoCAD 2007 2D နဲ့ 3D ဆွဲနည်းစာအုပ်တအုပ်ရှိတယ်...လိုချင်ရင်ဒီကနေနဲနဲချင်းတင်သွားပေးမယ်ဗျာ..:1:
3dmax မှတော့ ဆွဲရတာပိုလွယ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆွဲတဲ့အခါ စကေးကိုက်မဆွဲတော့ လွယ်နေတာထင်ပါတယ်။ စကေးကိုက်ဆွဲတဲ့နည်းစနစ်ပိုင်းပါပေါင်းစပ်လိုက်နိုင်ရင် ပိုပြီးအကျိုးရှိလာမယ်ထင်ပါတယ်။ ခက်တာက Graphic Card မြင့်မြင့်မရှိ၊ ဆာဗာကလည်း မသုံးနိုင်တာပဲဗျ။ render လုပ်ရင် Still ဆိုရင်တော်သေးရဲ့ နည်းနည်းလေးကွန့်ပြီး movie လုပ်လိုက်ရင် တစ်နေကုန်ရောပဲဗျာ။
AutoCAD လေး မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်လာပါပြီ။ Application တော်တော်များ သုံးတတ်တဲ့အထဲမှာ ကျွန်တော် မသုံးတတ်တဲ့ Software ကတော့ AutoCAD ပါ
( တောက် :w ၀င်ရှီုးလို့မရတော့၀ူးကွာ.. )
ကျွန်တော်ကြားတာကတော့ အခု ကြောင်လိမ်လှေကားတွေကို တိုင်ဖျောက်တဲ့ design နဲ့ ဆောက်နေကြပြီလို့ကြားတာပဲ...
အော်..3DMax မှာ movie ပါရှိုးလို့ရတယ်လား...မိုက်တာပေါ့ဗျာ....ခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ AutoCAD Inverter မှာလည်း 3D Effect တွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်ပြောတာပဲ...presentation ကို movie နဲ့ရှိုးလို့လဲရတယ်... AutoCAD seminar တခုမှာပြထားတာတွေ့တယ်...engine block တခုပုံကိုဆွဲပြီး movie နဲ့ရှိုးထားတာ crank shalf, connecting, cylinder တွေကတကယ့်engine တခုအလုပ်လုပ်နေသလိုပဲ...မိုက်တော့မိုက်တယ်ဗျာ...ဒါပေမယ့်ko pZi ပြောသလိုပဲကျွန်တော့်စက်ကလဲမထူးဘူး...AutoCAD တောင် 2007 ကိုမတင်ရဲဘူး...2006 နဲ့တောင် surface ပိုင်းတွေဆွဲရင်စက်ကတော်တော်လေးနေပြီ...အဲဒါကြောင့်ငြိမ်နေရတယ်...တကယ်လို့အဲလိုဆော့၀ဲလ်တွေကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အနဲဆုံးလိုအပ်မယ့် system တခုလုံးရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုပြောပြပါလား...ဟီး..အနဲဆုံးလို့ပြောထားတယ်နော်...အကောင်းဆုံးတွေချည်းပဲတော့မပြောကြေး...:D
အဲဒါဆိုလည်း၀င်ရှီုးလိုရအောင်တောင်းလိုက်အုံးမယ်... ကျွန်တော်ကို CADWrox plant pro 2007 ရဲ့ crack လေးရှာပေးပါလားဗျာ..:D Crack ရှာတဲ့နေရာမှာဆရာတဆူလို့ကြားတာပဲ...ဟီး..မြောက်ပေးလိုက်ပြီ..:P
3dmax စတင်လေ့လာနေပါတယ်။ အင်တာနက်ထဲက ကျူတိုရီယယ်တွေနဲ့ပဲ လေ့လာရတာပါ။ သိထား တတ်ထားတာလေးများရှိရင် တတ်နိုင်သလောက်မျှပေးနိုင်မလားခင်ဗျ။ modelling ပဲစပါသေးတယ်။ material တွေ animation တွေ မလုပ်သေးပါဘူး။ နဲနဲလွယ်တာလေးတွေစတာပါ။ တကယ်လို့ ပြောပြပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် ကျနော့ရဲ့ အခြေခံလောက်ကို ခန့်မှန်းမိအောင်တင်လိုက်တာပါ။ ခုလောလောဆယ် ပြဿနာက view တခုလုံးကို rotate လုပ်ရင်ဖြစ်ဖြစ် move ရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ပုံအတိုင်းမဖြစ်နေပဲနဲ့ လေးထောင့်ပုံစံပြောင်းပြောင်းနေပါတယ်။ ဘယ်နားက setting ကိုပြင်ရမှန်းမသိပါဘူး။ သိရင်ပြောပြပါခင်ဗျ။
လုပ်ပါဦးဗျ။ 2007နဲ့ 3D ဆွဲတဲ့ အပိုင်းလေး တင်ပေးပါဦး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။:D
ကျွန်တော့်မှာ ebook ရှိတယ်ဗျ။ ပို့စ်အသစ်တင်ပြီး share လိုက်မယ်ဗျာ... အခုဆိုရင် သီးသန့် ခေါင်းစဉ် လည်းရှိနေပြီဆိုတော့ အသေးစိတ်ဆက်ပြီး ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဗျာ။ အခုတစ်လော အလုပ်တွေအရမ်း များနေတဲ့အတွက် php ဖက်က ပို့စ်ကိုတောင် မဆက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ ဒီတော့ ဖြည့်ပြီး ဆွေးနွေး ပေးကြပါခင်ဗျား .....
အိုကေဗျာ။ ကျေးဇူးပါပဲ။ ဒေါင်းလုပ် လွယ်လွယ်လုပ်လို့ရမဲ့ဆီက တင်အုန်းနော်။ ရစ်ပစ်ရှယ် ဆိုတာနဲ့တော့ မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ။ 3dmax ပို့ထဲမှာပါ တင်ပေးလိုက်ပေါ့။ အားတဲ့အချိန်မှလုပ်ပါဗျာ။
အရစ်ဆွဲတာကိုစာနဲ့ပဲရေးပြလိုက်မယ်နော်...စကေးကတော့နောက်မှကိုယ့်ဟာကိုယ်တွက်ယူလို့ရပါတယ်...အရင်ဆုံးiso view နဲ့ torus တခုကိုဆွဲပါမယ်...torus ၇ဲ့tubeအချင်းသေးဟာ အရစ်၂ခုကြားအကွာဖြစ်မှာဖြစ်ပြီး..အချင်းကြီးဟာဘိုးတိုင်ရဲ့အချင်းဖြစ်မှာပါ...ပြီးရင် slice နဲ့ torus center ကနေ ထက်၀က်ပိုင်းလိုက်ပါမယ်..command တွေက
slice--(selest obj)--ZX--select the center of torus--- keep both sides---
ပြီးရင် 3d rotate နဲ့tube တဖက်ရဲ့ center ကနေတဖက်ကို +6 ဆိုရင်နောက်တဖက်ကို-6 ဒီဂရီစီလှည့်ပါမယ်... 5နဲ့6ကြားကိုtorus အကြီးအသေးပေါ်မူတည်ပြီး ပေးရပါမယ်..
modify--3d operation--3d rotate--select obj--Y axis---ဒီဂရီရေးရပါမယ်...
ကိုစေတန်ရေ..ဒါရိုက်အပ်လုတ်ကမရလို့ဗျာ...link နဲ့ပဲတင်လိုက်တယ်နော်..:101: ..
ကိုလူသစ်ရေ..ဆက်တာပေါ့ဗျာ...အပေါ်ကလုပ်ထားတဲ့ကွင်းပြတ်ကိုtube ၇ဲ့center ကနေကိုင်ပြီးလိုချင်တဲ့အရစ်အရေအတွက်တိုင်းcopy နဲ့ထပ်သွားပါမယ်(center to center)..အော်..မလုပ်ခင် union တခါထဲလုပ်ထားလို့ရပါတယ်...ပြီးရင်အကုန်လုံးကို union ထပ်လုပ်ပါ့မယ်..
ပြီးရင်cylinder တခုကိုခုနကစပရင်ပုံစံထပ်ထားတဲ့အောက်ခြေcenter ကနေ center ယူပြီးtorus ရဲ့အချင်းကြီးအတိုင်းဆွဲပါမယ်...အရှည်ကတော့ကြိုက်သလောက်ပေါ့ဗျာ..ပြီးရင်.. cylinder ကနေ စပရင်ကို subtract လုပ်လိုက်ရင်အရစ်ပုံရလာပါပြီ...
system requirement of AutoCAD 2007 လို့ရိုက်ပြီးရှာဗျာ .. သိလာလိမ်မယ့် ... RAM က2G တဲ့ဗျာ.. တခြားဟာတွေကတော့ရှာကြည့် ပြောပြတော့ဘူးနော်..
ကိုအေကေစတား ကျေးဇူးပါပဲဗျား။ ပြန်နုတ်ဖို့နည်းကို တခါမှမစဉ်းစားမိဘူး။ path နဲ့ဆွဲလှည့်ဖို့လောက်ပဲ ကြံနေတာ။ ကျေးဇူး ကျေးဇူး
အော်တိုကတ်ကိုစဆွဲတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်၊အသုံးနဲတဲ့ command တွေကိုအမြန်ရှာဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံး၀င်တဲ့ command တခုပါ။ command line မှာ ALIASEDIT ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ရင် AutoCAD alias editor window တခုကျလာပါမယ်...အဲဒီမှာ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ အော်တိုကတ်မှာသုံးလို့ရမယ့် keyboard shortcuts တွေကိုအက္ခရာစဉ်အတိုင်းပြပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်...အဲဒီမှာပဲ shortcuts တွေကိုလိုအပ်သလိုပြင်နိုင်ထပ်ဖြည့်နိုင်၊ဖျက်နိုင်ပါသေးတယ်...ပုံဆွဲနေရင်းနဲ့ alias editor ကိုခေါ်ထားပြီး task bar မှာ minimize လုပ်ထားလဲရပါတယ်...:67:
i'm interest in Auto CAD
i study alittle,haven't proficiency
if,you don't haveaproblem i want to learn from you
သိသလောက် ပြောပြပေးဖို့ ၀န်မလေးပါကြောင်း သတင်းကောင်း
ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ...:1: ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းလေ့လာနေဆဲအဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်...ကျွန်တော်တို့သိသလောက်ပြောပြပေးဖို့ကတော့၀န်မလေးပါဘူးဗျာ...သင်ပေးဖို့ဆိုတာထက်ကိုယ်တိုင်ဆွဲကြည့်ရင်းနဲ့ကမှကြုံလာတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖိုရမ်မှာမေးတာဟာပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်..polestar သိချင်တာမှန်သမျှကိုမေးနိုင်ပါတယ်...သိရင်ချက်ချင်းဖြေပေးပါ့မယ်..မသိရင်လဲ၀ိုင်း၀န်းဆွေးနွေးပြီးအဖြေရှာလို့ရတာပေါ့ဗျာ...ကျွန်တော်ဆီမှာစာအုပ်တွေရှိပါတယ်...လိုအပ်လို့ရှိရင်အဲထဲကနေကူးရေးပြီးတင်ပေးပါ့မယ်...အချိန်ရသလောက်ပေါ့ဗျာ...:6:
autocad တက်ဘို့ မြန်မာပြည်မှာ
ဘယ် ကျောင်း(သင်တန်းနေရာ) အကောင်းဆုံးလည်းသိပါရစေ
ချန်းချန်းလညး် Auto CAD user တယောက်ပါပဲ...
ချန်းချန်းပြောမယ့် Auto CAD
ဆိုတဲ့ ဘလောဂ်လေးတခုကို လုပ်နေတာ...
ရန်ကုန်က သယ်ရင်းတော်တော်များများက ဖွင့်လို့မရ၀ူးတဲ့.. blogger site ကို..(သေရော...)
အဲတခုသိချင်တာက ကိုစေတန်ဂေါ့ ပြောသလို မြန်မာ font အတွက် .eot ကိစ္စတွေလုပ်ပြီးခဲ့တာတောင်
ချန်းချန်းရဲ့ ဘလောဂ်က IE နဲ့ဖွင့်ရင် font ပျောက်နေတုန်းပဲ...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရတဲ့အချိန်နဲနဲလေးမှာ ရသလောက်တော့၀င်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်....
:101:Sorry for my english language beacuse i can't type myanmar language.Here is some
rendering link for my job.All member comment my jobs and let with share......http://forums.augi.com/showthread.php?t=78035
ကို php ရူးတဲ့လူရေ......
ဘယ်ပဲသွားသွား ဘာပဲလုပ်လုပ် ပါနော့..။ ကိုယ်သွားမဲ့ နေရာမှာ ကိုယ်ကဘာသွား လုပ်မှာလဲဆိုတာက အရေးကြီးပါတယ်နော့...။
CNC လိုစက်တွေနဲ့ လုပ်ရမဲ့နေရာ ကိုသွားရမယ် ဆိုရင်တော့ တတ်ကိုတတ်ထား သင့်တယ် ဗျို့...... အဲ့ဒီအပြင်
Master CAM လို CNC နဲ့တွဲ လို့ရတဲ့ Software တွေကိုလဲ တတ်သွားသင့်ပါတယ်။ မသွားခင်မှာလဲ ပြည်တွင်းက
တစ်ကယ့် CNC တွေနဲ့ လုပ်နေတဲ့ Factory တွေမှာ ၆လ လောက်တော့ အတွေ့ အကြုံ ယူသွား သင့်တယ် ဗျို့....
အဲ့ဒါမှ Drawing ကိုကောင်းကောင်း ဆွဲတတ် သလို Drawing ကိုကောင်းကောင်း ဖတ်တတ် မှာပါ။
Engineering Drawing မှာက ဆွဲတတ် ရုံနဲ့ မပြီးသေးပါဘူး ကိုယ့်ဆီရောက်လာတဲ့ Drawing ကိုကောင်းကောင်း ဖတ်တတ်ရပါမယ်
အဲ့ဒါမှ Master CAM ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ ဖြစ်စေ CNC ထဲကို N code , G code တွေအဖြစ်နဲ့ တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်း
လို့ ဖြစ်စေ လုပ်လို့ရမှာ ဗျို့.... အရေး ကြီးတာတစ်ခုက AUTO CAD ကို အမှတ်မ မှားကြဖို့ ဗျ..
AUTO CAD ဆိုတာ Engineering Drawing ကို Computer နဲ့ ဆွဲတာပါ။ Engineering Design ပါ... Graphic Design မဟုတ်
ပါဘူး။ တစ်ချို့ တွေက ပုံလှလှလေးဆွဲ နိုင်ရင် AUTO CAD ကျွမ်းကျင်ပြီလို့ ယူဆတတ် ကြပါတယ်။ အမှန် တော့ အဲ့ဒါ
မှားပါတယ်။ Engineering Drawing တာ လှနေဖို့က အရေးမကြီးပါဘူး။ တိကျမှု ရှိဖို့ နဲ့ကိုယ်ဆွဲတဲ့ Componant ရဲ့
ပါသင့်တာ တွေပါနေ ရပါမယ်။ အဲ့ဒီမှာ လှအောင်သွား လုပ်လိုက်ရင် Work Piece ပျက်ပါပြီ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
တချို့သင်တန်း က နေ AUTO CAD Advance Pass ဆိုပြီး အောင်မြင်လာသူ ကလေး တစ်ယောက် Ellipse နဲ့ Oval
ဘယ်လို ကွဲပြားခြားနားလဲ ဆိုတာမသိလို့ တော်တော် လေးအံသြမိရ ပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ညွှန်းချင်တာက ဘာမှမတတ်သေး
ခင်မှာ Engineering Drawing ဆိုတာဘာလဲ ဘာတွေအသုံးပြု ပြီးဆွဲရလဲ ဘာတွေဆွဲ နိုင်လဲ အရင်သိအောင်လုပ်ပြီး မှ
AUTO CAD ကြပါဗျာ နော့....။ သူများ ကပ်တိုင်း လိုက်မကပ် ကြပါနဲ့ လို့ စေတနာ ဗလဗွနဲ့ အကြံဉာဏ်ပေးပါရစေ။
ကျနော်လဲ အဲဒီ CAD ကို စိတ်၀င်စားတဲ့တစ်ယောက်ပေါ့ဗျာ။ 3D ဆွဲတဲ့နေရာမှာ pipe fitting လေးတွေကို ရယ်ဒီမိတ်လေးတွေများ ဆွဲပြီးသားပရိုဂရမ်လေးတွေနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး သိမှီသူရှိရင် အကြံလေး ဘာလေး ပေးကြပါအုံးလို့။ ဥပမာဗျာ2inches L bole ကို 3D ဆွဲပြီးသားလေး တစ်ခါထဲယူသုံးလိုက်ချင်တာဗျာ။ ကျန်တဲ့ ဆိုဒ်တွေလဲ အတူတူပေါ့။ အင်တာနက်မှာ ရှာတော့လဲ trail ဘဲပေးတယ်ဗျ။ national မှာ မေးတော့လဲ အူကြောင်ကြားလုပ်နေကြတယ်။ ၀ယ်လို့ရရင်လဲ ဘယ်လိုပြော၀ယ်ရမလဲပေါ့ဗျာ။ ကျနော့်မေးခွန်းမရှင်းရင် ကျနော့်ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ကျနော့်မေးလ်က [email protected] ပါ ခင်ဗျ။
ကျနော်သိသလောက်ပြောရရင်ဖြင့် လှည်းတန်းနားက quick cad ကတော့ နာမည် အတော်ရဆိုဘဲဗျ။ အဒီသင်တန်းက ကျနော့်ကို ကော်မရှင်လဲမပေးပါခင်ဗျ။ ကျနော်လဲ မတက်ဘူးပါခင်ဗျ။ သူငယ်ချင်းတွေ (စိတ်ချရသော။ မလိမ်တတ် မဖြီးတတ်သော။ ကျနော်လိုမဟုတ်သော) သူငယ်ချင်းများက ညွှန်းပါသည်။ စုံစမ်းတော် မူကြပါကုန်။
ကျနော် ပို့စ်တစ်ခုတင်တိုင်း avatar နေရာမှာ မွေးကင်းစကလေး ဘဲ လုပ်လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဗျာ။ ကျနော် မရှင်းတာက အဲဒီကျနော် မွေးကင်းစလေးက ဘောင်းဘောင်းပါသလား မပါသလား သိပ်သိချင်နေပါတယ်ခင်ဗျ။ အက်ဒမင်များကိုယ်တိုင်လဲ ဒီ CAD ဖိုရမ်လေးကို ပွဲဆူအောင် ၀င်ရောက်ဖွပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ ဒီဖိုရမ်ကို avatar နေရာမှာ အကြီးကြီးဖြစ်နေပြီ ဆိုသည်အထိ ၀င်ရောက်အားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း။
phoehtet wrote: »
ကျတော်တို့တွေ ဘယ်သင်တန်းတွေကဘယ်လောက်ကောင်းလဲ ဆိုတာတွေ ခဏမေ့ထားပြီး ကျတော်တို့ဖာသာ ဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲ ဆွေးနွေးကြည့် ုကရအောင်လားဗျာ....အရင်ဆုံး အင်စတော့ကစုကတာပေါ့...ကျတော် အရင်ကသုံးခဲဖူးတဲ့ ၂၀၀၆ ဗားရှင်းအထိတော့ ကီးဂျန်နရေတာ ထဲကို အတီဗိတ်ကီးထည့် လိုက်ရင် စီရီရယ်ကီး ရလာပါတယ်..။ ၂၀၀၇ ကစလို့ ခရက်ပါအဆစ် လုပ်ပေးရတယ် ပြောတယ်။ ခရတ်လုပ်ပုံလေး ကစလို့ ဆွေးနွေး ပေးစေချင်ပါတယ်ဗျာ...။
:106:ကဲ ကျတော်တို့ ခရတ်ကစပြီးဘယ်လို ဆက်လုပ်ုကမလဲ:106:
အော်တိုကတ်ကို ခရတ်လုပ်ဖို့ အရင်ဆုံး ဆော့၀ဲကို အင်စတောလုပ်ပါ။ စီရီရယ် နံပါတ်တောင်းတဲ့အခါ 666-696969 (သို့) 666-989898 ကိုထည့်ပါ။ request codes ကို ကူးထားပါ။ အော်တိုကတ်ကို အားလုံးအင်စတောလုပ်ပြီးရင် cd/ dvd ထဲမှာပါတဲ့ ခရတ်ဖိုင်ထဲက ခရတ်ကို ကလစ်လုပ်ပြီး request code ကို ထည့်ပါ။ ပြီးရင် activation code ရဖို့ generate ကို နှိပ်ပြီး activation code ကို ကော်ပီကူးပါ။ ပြီးရင် paste the activation code ကို ကလစ်လုပ်ပြီး ကော်ပီးကူးလာသော ကုတ်များကို paste(ctrl+v) လုပ်ပါ။ အိုကေ ကိုနှိပ်ရင် အားလုံးအိုကေ သွားပါလိမ့်မယ်။:)) :39:
ကို ပူလူကွီး ရေ အစ်ကို့ရဲ့ ခရတ်လေးက ဘယ်ဗားရှင်းအတွက်လဲမသိဘူးအစ်ကို ရေ....
အားလုံးအင်စတောပြီးသွားရင်တော့ ကွန်မန့်တွေသိဖို့လိုလာပြီဗျာနော့ ကျတော်တို့ဘယ်ကစပြီးလေ့ လာကြရင်ကောင်းမလဲ.....
ကျတော်ကတော့ ကွန်မန့်တွေက စပြီးလေ့လာချင်တယ်ဗျာ.... ကို ပူလူကွီး အနေ နဲ့ဘယ်ကစပြီးလေ့လာရင် ကောင်းမလဲအကြံဉာဏ်လေး များပေးပါဦးလားဗျာ
buildings တွေထဲ walk and look around အတွက် ဘယ်လိုလုပ်လဲ မသိဘူးနော်၊:5:
auto CAD သင်တန်းအားလုံးဟာ လိမ်နေကြတာ ဘာလို.လဲသိလား? သူတို.က Engineers မဟုတ်တဲ.သူတွေကို လက်ခံသင်ပေးနေလို.ပဲမဟုတ်လား? ဥပမာ Myanmar Major တို. Physics တို. Maths, Accounts စတာတွေပေါ.
အဲ..... ဒီထဲ school/universities မှာ mechanical drawings တစ်ပုံမှ မဆွဲခဲဖူးတဲ. electrical ကျောင်းသား/ကျောင်းသူတွေက auto CAD သင်တန်းတွေမှာ ရုပ်တည်နဲ. mechanical drawings, civil drawings တွေဆွဲနေကြတယ်ဗျာ ဟားဟားဟား..............
ဟြော်.. ဆယ်တန်းအောင်တဲ.သူတွေလည်း ပါသေးသဗျာ...
ဒီလိုတာ ရစတမ်းဆိုရင် ကျုပ်တောင် သူနာပြုသင််တန်းလေးတစ်ခုမှာ (၂ / ၃) လ လောက် တက်ပြီး universities ကဆင်းတဲ.ဆရာ၀န်တွေနဲ. ဆေးအပြိုင်ကုစားလိုက်ချင်ပါရဲ.ဗျာ.........
ဒါဆိုရင် ကျုပ်ကလေ "ပေါရာန"က "ပေါရာကျ" ကြီးဖြစ်နေမှာပေါ.နော် .. ဟားဟားဟား............=))
saihomfa wrote: »
တကယ် တော့ လက်နဲ့ဆွဲဖူးပြီးအခြေခံ ပိုင်မှဆက်သွားသင့်ပါတယ်။ နေရာတကာ အလွယ်လေးရတယ်ဆိုရင် အခြေခံဘာမှန်းမသိ တဲ့လူတွေများလာရင် နောက်ပိုင်းလူတွေအတွက် မကောင်းနိုင်ပါ.....
:5:ကျတော်ရေးလက်စလေးပါ....လိုအပ်ရင်ဖြည့်စွက်ပေးကြပါဦး...ခေါင်းထဲကျန်သလောက်လေးကို ပြောကြည့်တာပါ.... :5:
\_:D/ http://yathar.mzblog.net/ \_:D/
အဲဒါအမှန်ပဲဗျို့. အခြေခံ ကို လေ့လာသင့်ပါတယ်။ အခြေခံ hand drawing မတက်ပဲနဲ drafter လုပ်လို့ အလုပ်ထဲရောက်မှ section ဖြတ်မတတ်။ view တွေ မမြင်တက်တော့ myanmar drafter တွေ သိက္ခာကျတော့တာပေါ့။ ေ
နောက်တစ်လပြတ်သင်တန်း.... ကျတော်နည်းနည်းမျက်မုန်းကျိုးတယ်ဗျို့။ တနေ့ ၃နာရီလောက်နဲ့ တလလောက် အပြတ်သင်. လက်တွေလုပ်ငန်းခွင်၀င်တော့ ဒုက္ခနဲ့ လှလှတွေကြမှာဗျို့။ :39: